Ulwazi nge Khasino ye Bitcoin e-Ningizimu Afrika
Ikhaya / Izindlela zokukhokha / amakhasino e-bitcoin
Enye yezinkinga ezinkulu abadlali abahlangabezana nazo emakhasino e-inthanethi yisikhathi esithathwa imali abayikhiphile ukukufinyelela kubo. Ukufika kwe-Bitcoin kwashintsha konke lokho.
I-Bitcoin, ngokungafani nemali ejwayelekile ye-fiat, yi-cryptocurrency. Iyimali edijithali, okusho ukuthi ungayisebenzisa ku-inthanethi kuphela. Ayilawulwa yinoma yimuphi uhulumeni noma isikhungo sezezimali. Futhi inzuzo enkulu kakhulu: ngoba ayilawulwa, izinkokhelo – ukudiphozitha kanye nokukhipa imali- ziyashesha.
Izinzuzo eziningi ezinikezwa yi-Bitcoin ngaphezulu kwezimali ezivamile ze-fiat ziholele ukuthi amakhasino e-inthanethi aqale ukwamukela i-Bitcoin njengemali yokukhokha.
Yini Ikhasino ye-Bitcoin?
Ikhasino ye-Bitcoin yikhasino ye-inthanethi noma ikhasino yeselula esekela izinkokhelo nge-Bitcoin. I-Bitcoin isibe khona isikhashana futhi isetshenziselwa ukwenza izinkokhelo ku-inthanethi. Ekuqaleni amakhasino e-inthanethi ayengabaza futhi engakhululekile ukuvumela ukusetshenziswa kwayo ngoba abengazi ngayo. Esinye isizathu sokukhathazeka kwakuyiqiniso lokuthi ukuhwebelana nge-Bitcoin kuqinisekisa ukuzifihla ngokuphelele.
Kodwa-ke, ukuthandwa kwe-Bitcoin njengemali yokuthenga ku-inthanethi kwashintsha lowo mbono. Okushintshe izinto ngokuphelele yijubane lokuqedela ukuhwebelana. Futhi liyinikeze izinzuzo ezinkulu njengoba abadlali abaningi sebeqalile ukusebenzisa i-Bitcoin njengemali eyintandokazi.
Izinhlobo Zamakhasino e-Bitcoin
Kunezinhlobo ezinkulu ezingu-2 zamakhasino e-Bitcoin. Kukhona amanye amakhasino e-Bitcoin asekela zonke izimali ze-fiat kanye ne-Bitcoin: ungakhetha ukukhokha ngezimali ezifana ne-Euro, amadola aseMelika, ama-GBP, amaRandi kanye nanoma yiziphi ezinye izimali othola amakhasino e-inthanethi evame ukusekela, noma ungakhetha ukukhokha ngama-Bitcoins.
Uhlobo lwesibili lwamakhasino e-Bitcoin yilawo amukela izinkokhelo ngama-Bitcoins kuphela. Kula makhasino wenza amadiphozithi nokukhipha imali ama-Bitcoins kuphela. Noma kunjalo, uma sibheka konke okunye, zombili lezi zinhlobo zamakhasino ziyafana. Abukeka futhi asebenza njengamanye amakhasino e-inthanethi neselula, asebenzisa isofthiwe evela kubahlinzeki abafanayo abajwayelekile, futhi akunikeza amabhonasi athakazelisayo kanye namaphromoshini kubadlali bawo.
Imehluko uma eqhathaniswa namakhasino e-inthanethi neselula ajwayelekile , uma ikhona, mincane, ngaphandle kowodwa: ukuhwebelana kwenzeka ngokuphazima kwehlo, ikakhulukazi ukukhipha imali. Lo mehluko umkhulu uma kuqhathaniswa namakhasino ajwayelekile.
Okulandelayo ngezinye zezindawo lapho ikhasino ye-Bitcoin inghluka kunekhasino ye-inthanethi ejwayelekile.
Yonke imidlalo emakhasino e-Bitcoin ilungile okuqinisekisayo (provably fair). Sizobuye sixoxe ngomqondo we lungile okuqinisekisayo ngokuningiliziwe kamuva.
Uhlu lwemidlalo lungabandakanya imidlalo embalwa ekhethekile enikelwe ukuphromotha ikhasino. Ngokuvamile le yimidlalo ongayitholi ekhasino ejwayelekile.
Kungaba khona ibhonasi ekhethekile, isib. ibhonasi yediphozithi engekho noma ibhonasi yokukwamukela, ekhasino ye-Bitcoin. Lezi zinhlobo zamabhonasi zinikezwa ngo-opharetha ukuphromotha ikhasino ye-Bitcoin.
Amakhasino e-Bitcoin ngokuvamile anezindleko eziphansi zokuhwebelana. Lokhu kungenxa yokuthi i-Bitcoin iyimali ye-idijithali engalawulwa futhi engekho ngaphansi kwebhange elikhulu. Noma yiziphi izindleko zokuhwebelana zibhekwa kuphela njengendlela yokukhuthaza abavukuzi be-Bitcoin ukugcina i-blockchain iqinile. Ikhasino ngokwayo ngeke ikhokhise noma iyiphi indleko yokusebenzisa ama-Bitcoins.
Ngoba i-Bitcoin ayiphansi kwebhange elikhulu noluthi ayilawulwa ngumthetho, asikho isidingo esidingekayo sokuthola amalayisense.
Amakhasino e-Bitcoin, ngokungafani namakhasino e-inthanethi ajwayelekile, anikeza abadlali indawo ecashile ngokuphelele. Lokhu kuyinzuzo enkulu ngoba ivumela ukuba babheje imali- encane noma enkulu- ngaphandle kokukhathazeka nganoma iyiphi inhlangano yezezimali noma kahulumeni ilandelela ukukhokha kwabo.
Nakuba ukwazi ngamakhasino e-Bitcoin kungusizo olukhulu, kubalulekile futhi ngokulinganayo ukwazi ukuthi empeleni ama-Bitcoins asebenza kanjani. Lokhu kuzokuvumela ukuthi ukwazi ukuyisebenzisa kangcono nangempumelelo. Awuqinisekile ukuthi i-Bitcoin isebenza kanjani? Chofoza lapha ukufunda kabanzi nge-Bitcoin
Manje njengoba usuyazi ukuthi yini i-Bitcoinkanye nokuthi iyini ikhasino ye-Bitcoin, ake sibheke ukugembula nge-Bitcoin emakhasino e-inthanethi naweselula.
Ukugembula nge-Bitcoin Ku-inthanethi Nakuselula.
Inzuzo enkulu kakhulu, njengoba sishilo ekuqaleni, yijubane lokuqedela ukuhwebelana. Lesi ngesinye sezizathu ezivame kakhulu zokuthi abantu bashintshe ukwenza izinkokhelo ngemali ye-fiat besebenzisa noma yiziphi izindlela zokukhokha ezijwayelekile benze izinkokhelo nge-Bitcoin.
Isici sesibili esikhulu ukuzifihla okunikezwa yi-Bitcoin. Awudingi ukuveza imininingwane ngawe ukuze udlale imidlalo yasekhasino ye-inthanethi ngemali yangempela emakhasino e-Bitcoin.
Isici esikhulu sesithathu yiqiniso lokuthi umdlalo ngamunye ulungile okuqinisekisayo; okusho ukuthi abadlali banganquma ukuthi i-spin ngayinye yesondo noma yedayisi ilungile.
Isici sesine esikhulu ukuthi i-Bitcoin uhlobo lwemali olungekho ngaphansi kwebhange elikhulu, okusho ukuthi ayikho ngaphansi komthethonqubo nokulawulwa okwenziwa yizikhungo zezimali nezinhlangano zikahulumeni ezilawula izimali ezijwayelekile kanye nezindlela zokukhokha ezisetshenziselwa ukuzicubungula zedlule.
Emakhasino e-Bitcoin amaningi, amathuba okuthi ikhasino iwine mancane uma eqhathaniswa nalawo atholakalayo emakhasino e-inthanethi ajwayelekile, futhi lokho kuya heha abadlali kakhulu.
Into enhle kakhulu ngokugembula emakhasino e-inthanethi neselula e-Bitcoin ukuthi awuphuthelwa yinoma ikuphi ukujabula ohlangabezana nakho ekhasino ye-inthanethi ejwayelekile. Uthola uhlu oluphelele lwemidlalo ongakhetha kuyo kubandakanya ama-slots, imidlalo yetafula, imidlalo yamakhadi, i-poker yevidiyo, imidlalo ekhethekile kanye nemidlalo yomdayisi obukhoma.
Kwamanye amakhasino uzothola nemidlalo ye-jackpot ekhula njalo (progressive jackpot). Uhlu lwemidlalo olutholayo luncike kukhasino okuyo kanye nakumhlinzeki noma abahlinzeki besofthiwe abasetshenziswa yikhasino.
Iningi labahlinzeki besofthiwe yekhasino ye-inthanethi abahamba phambili banikela ngemidlalo yabo emakhasino e-Bitcoin. Yonke imidlalo iqhutshwa ngokulingana, njengoba kushiwo ekuqaleni.
Kodwa-ke, ukuze uqiniseke, ungafunda ngedumela lamakhasino e-inthanethi e-Bitcoin ngaphambi kokubhalisa noma kuiyiphi ikhasino. Lapha e-OnlineCasinosOnline.co.za, sinezibuyekezo zawonke amakhasino amakhulu e-Bitcoin ezithembekile, eziphelele neziningiliziwe. Konke okumele ukwenze ukufunda izibuyekezo bese ukhetha leyo ehlangabezana kahle nezidingo zakho.
Uhlu Lwethu Lwamakhasino E-Bitcoin Aphezulu Abadlali BaseNingizimu Afrika